Daminta danninta | Heeshi
Arbaca, Juunyo 19, 2013 ·	by Idiris M. Cali ·	in Maqaallo	· Faallo u dhaaf
Barqadii, Koodaar Shacbaan 9, 1434, ayaa waxaan illinka ka furay laba haween ah oo is-dhalay. Hooyada ayaa soo sokaysay, waxayna bariido debadeed ii sheegtay magaceeda iyo magaca gabadheeda. Ka dibna waxay tiri:
Waxaan nahay Jehovah’s Witnesses. Waxaan jecelnahay inaan kaala hadalno arrin innaga oo dhan xanuun innagu wada haysa. Waa danninta (prejudice). Aan ku weydiiyee, ma u malaynaysaa in dunideennan ay ka jirto, habayaraatee, wax dannin ah?
Waxaan ugu warceshay, “Haa! Dannintu waa alab dadeed. Dunideennan inta dadku ku noolyahay dannintuna way ka jiraysaa.”
Waxay hooyadu, iyadoo madaxa ruxaysa, tiri: Waa run. Waa run. Waxay la soo kala baxday kutubkii galka casaa ee ay sidatay, iyadoo damacsan in ay meerisyo iiga mariso—saan maleeyay.
Markiiba intaan isku yaryaraaday ayaan hadal bilaabay. Waxaan is arkay anigoo macawis hilan, sidaan ku soo kacayna u cawlan. “Aan dhar habboon soo xiddho, ee in yar ma i sugi kartaan? Waa dhaqankayga, oo bahashan markaan guriga ku negahay ayaan gashtaa. In yar i suga!”
Markay intaa iga oggalaadeen iyagoo dhoolabirraynaya, baan hal-haleel ku beegsaday suuliga. Waan soo fooldhaqday, biyana ku soo salaaxay timaha. Macawistii baan surwaal jiinis ah isaga baddalay.
Wax aan dhannayn saddex mirir gudahood ayaan hooyadii iyo gabadheeda ugu soo laabtay. Irridkii oo aannan sii wada awdin baan uga baxay. In ay hore u soo dhaafaan oo fadhiistaan waxay kaga gaabsadeen: Arrinteenna sarajoogga ayaan ku dhammaysanaynaa; xaafadda oo dhan baan ku wareegaynaa, waqtiguna waa nagu ciriiri.
Kolkaas baan u cafaarigsanaa in aan si habboon hooyada uga dhagaysto murtida ay kutubka iiga xuli rabtay. Meerisyada 34d iyo 35d ee Falimaha (Acts) 10 ayay ii aqrisay. Eebbe dadka uma kala eexdo, ayay carrabka ku adkaysay.
Anigiyo gabadheeduba waxaan isku raacnay midkaas. Iyadoo sii wadata, waxay hooyadu ku dartay: Ma ogtahay in dannintu gaasiri doonto? Isla markiiba waxaan u celiyay, “Haa, oo Aakhiro markii la tago, dannintu halkaas ayay ku dab beelaysaa.”
Maya, maya, ayay tiri hooyadu. Boqortooyada Eebbe ee dhulka ka cammirmi doonta ayay dannintu ka weynaysaa xaabo. Waa sida ku qoran kutubkan; sidii Masiixu ballan qaaday. Wuxuu ahaa run badane daacad ah. Anna waxaan u raaciyay, “Waliba kalgacayli ah!”
Gabadheeda ayaa intaas markay iga maqashay tiri, Miyaad aqrisataa baybalka? Waxaan u ceshay, “Haayoo, mar mar baan galshada ka furtaa.” Hooyada ayaan dib u jalleecay foolkeedii furfurnaa. Illin ayay iska tiraysay.
Gabadheeda ayaa mar kale i weydiisay, Iga raali ahow: Diinta aad haysato waa tee? Anoo aalanaya baan iri, “Waxaan ahay Muslin.” Waxay ii raacisay, Qof fiican baad tahay. Waxaan ku iri, “Barte Eebbe ayaan isku taxallujiyaa inaan ahaado.”
Hooyada, oo aan lixdan-jir ka yarayn, baa ii soo fidisay warside soo baxay Juunta sannadkan oo ku magacaaban, The Watchtower. Waan ka guddoomay. Gabadha ayaa igu adkaysay inaan aqriyo, oo aan si dhiirran u aqriyo.
Waan sii nabadgalyeeyay. “Maalintiin ha wacnaato,” ayaan ku sii dhahay. Adiguna sidoo kale, ayay wada dhaheen.
Waxaan filayaa inaan hooyada iyo gabadheeda ka farxiyay. Sidee baanan uga farxin marba haddii aan si xushmadi ku dhan tahay u qaadaadhignay arrin inna wada haysata, oo ay tahay in aynu sidaas uga wada hadalno?
Qudhayduba waxaan aad ugu faraxsanaa inuu Eebbe i solonsiiyay casharka uu igu baray Tusmada 46d ee Deerka Caaracaaro. Ereyga “axsan” ee tusmadan ku jira oo uu qof waliba alabkiisa (inta iinta leh) kula dagaallamo oo qudha ayaa danninta damin karta.
Tilmaamayaal: Af-Soomaali, Diin, Islam, Muslin, Soomaali
← Xul, xulasho iyo xusid
Miisaamista “Daguugaan” →